🥇 accounting yamatyala
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 153
Ividiyo yokubalwa kwemali yamatyala
Myalelo we-accounting yamatyala
Ukubalwa kwetyala kwi-Software ye-USU kuhambelana ngokupheleleyo nemigaqo yobalo, eyahlula ityala, kuxhomekeke kwixesha lokuhlawulwa kwemali mboleko efunyenweyo, ngokwesivumelwano, kwixesha elide-ixesha lokuhlawulwa kwetyala lingaphezulu kweenyanga ezili-12 , kunye nexesha elifutshane, xa ityala kufuneka lihlawulwe ngaphambi kokuphela kwexesha lonyaka. Ngapha koko, ukubalwa kwamatyala kwiikhredithi ezifunyenweyo kulungelelaniswe kungekuphela ngala macandelo mabini kodwa kwanababolekisi kunye nababolekisi. Oku kugqitywa yimeko yombutho ofake le software, enokusetyenziselwa naliphi na iqela kwisivumelwano semali-mboleko, nangona, ukuba ucinga, ukuba umxholo wengxoxo ziikhredithi ezifunyenweyo, kunye nokubalwa kwazo, oko kuthetha ukuba Bathetha ngeshishini eligcina iirekhodi zemali mboleko efunyenweyo.
Ukulawulwa kwetyala langoku kwiikhredithi ezifunyenweyo kusekwe kwindawo yogcino lwemali mboleko, apho iikhredithi ezifunyenweyo zenza imbali yazo, ukuqala kumhla wokungeniswa kwesicelo, ukuvunywa kwayo okulandelayo, kunye nokudluliselwa kwemali kwiakhawunti efanelekileyo, ukuthengiselana kwetyala kuthathelwa ingqalelo imigaqo kunye Izixa ekufuneka zihlawulwe, ukuhlawulwa kwekhomishini, kunye neepesenti Ikhredithi nganye efunyenweyo, ine-'dossier 'yayo eyahlukileyo kwindawo yogcino lwedatha enendawo ebekiweyo ebonisa imeko yetyala okwangoku, kwaye inqanaba, nalo, limiselwa ngumbala, apho abasebenzisi benkqubo bajonge khona ukuzalisekiswa kweembophelelo ukuhlawula eli tyala. Imeko yetyala kwimali mboleko efunyenweyo inezikhundla ezininzi, kubandakanya ukuhlawula kwangexesha kwishedyuli, ukwaphula imihla ebekiweyo yokuhlawula, ukulibaziseka, ukongezwa kwezohlwayo, kunye nabanye. Umsebenzisi wahlula amanqanaba ngokwenqanaba labo lengxaki, ngaphandle kokuchitha ixesha evula uxwebhu ngalunye ukuze baziqhelanise nenqanaba letyala.
Ukucwangciswa kokubalwa kwamatyala kwimali mboleko efunyenweyo kuyifezekisa ngempumelelo eyona misebenzi iphambili yayo - kugcina ixesha labasebenzi kwaye kubonise izikhombisi zentsebenzo ukuqinisekisa uvavanyo olukhawulezileyo lweenkqubo zomsebenzi, ezenza ukuba kwandiswe ukusebenza kweenkqubo kunye nemveliso yabasebenzi, ingeniso yeshishini, ngelixa uququzelela ngokufanelekileyo ulwazi ngamatyala kwiikhredithi ezifunyenweyo kunye nolwakhiwo lweenkqubo zokwenza ingxelo. Ukufakwa koqwalaselo lobalo lwamatyala kwimali mboleko efunyenweyo kwenziwa ngumphuhlisi, emva koko unikezelo olufutshane lwazo zonke izakhono zesoftware, ezingabalulekanga kangako, ezenza ukuba kube nako ukukhulula abasebenzi ekwenzeni imisebenzi emininzi yemihla ngemihla. , ikakhulu ekuthatheni inxaxheba kubalo-mali kunye nokubala. Ke, le yindlela inkqubo ye-automated accounting eya kuzenza ngayo ezi nkqubo ngokuzimeleyo, ukubonelela ngeshishini ngokuchaneka kunye nesantya sokuqhubekeka kwedatha ekufuneka irekhodwe.
Ngapha koko, abasebenzi abasabandakanyeki ekwenziweni kwawo nawaphi na amaxwebhu. Uqwalaselo lobalo lwamatyala kwiikhredithi ezifunyenweyo lubenza ukuba bazimele, basebenze ngokukhululekileyo kunye nedatha efumanekayo kwinkqubo kunye nebhanki yeefom ezakhelwe kuyo, ezilungiselelwe ngokukodwa ukwenza le misebenzi. Amaxwebhu aveliswe ngokuzenzekelayo ahambelana ngokupheleleyo nazo zonke iimfuno, ahlangabezana nesicelo nenjongo, oku kubekwa esweni lulwazi kunye nesiseko sereferensi, esakhelwe kwinkqubo yokubala, apho kuqokelelwa onke amalungiselelo, imigaqo, imigaqo kunye nemigangatho, kubandakanya ukulungiswa kweengxelo zemali. Isiseko siqhuba ukubek'esweni rhoqo kokuvela kwezilungiso ezintsha kumaxwebhu asele ekho olawulo, athathela ingqalelo kwaye alungelelanise useto kwinkqubo ngokwayo ukufumana iziphumo ezihlaziyiweyo kubalo nakukulungiswa kwamaxwebhu. Ukufumaneka kolwazi kunye nesiseko sesalathiso kukwabonelela ngokuseta ukubala, okuvumela ukubala okuzenzekelayo ukusukela ukuba umsebenzi ngamnye ufumana ixabiso lokubonisa ngokujonga imigangatho esekwe kushishino kwaye iboniswe kwisiseko.
Uxanduva lwabasebenzisi lubandakanya umsebenzi omnye kuphela - ukongezwa kwangexesha kwinkqubo yokufunda yabo abayifumeneyo ngelixa besenza imisebenzi yomsebenzi ngaphakathi kobuchule. Ngokwesiseko sabo, inkqubo ye-automated accounting yenza ukubalwa kwangoko kwezalathi ezikhoyo ezinxulumene notshintsho olufunyenweyo, ukwakha inkcazo yenkqubo yangoku, ke ngoko, inomdla wokufumana ngokukhawuleza ulwazi olusisiseko nolwangoku kubasebenzisi, ukubakhuthaza ukuba basebenze ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yokufakwa kwedatha ngokubala ngokuzenzekelayo umvuzo womyinge womsebenzisi, ngokuthathela ingqalelo umthamo womsebenzi obhalisiweyo kwimilo yomsebenzi wekhompyutha. Kwangelo xesha, abasebenzisi basebenza kwiifom zekhompyuter, ulwazi oluthunyelwe kubo luphawulwa ngokungena, elifumana wonke umntu kunye negama eligqithisiweyo lokungena kwinkqubo ukukhusela imfihlo yolwazi olusemthethweni, kwaye ke, luthwala ubuqu uxanduva lomgangatho wedatha yabo kunye nexesha lokufaka kwabo kwinkqubo.
Ukongeza kwisiseko seekhredithi, i-CRM iboniswa njengesiseko sabathengi, apho i-accounting yokunxibelelana nabo icwangcisiwe, imbali eneenkcukacha yabafowunelwa iqulunqwe ukusuka kumzuzu wobhaliso. Ifayile nganye yobuqu iqulethe idatha yobuqu, abafowunelwa, ugcino lwamaxwebhu, iifoto, kunye noluhlu oluneenkcukacha lomsebenzi owenziwe ngumhla- iifowuni, iileta, iintlanganiso kunye nokukhutshwa kwemali-mboleko. I-CRM ikwagcina zonke izibonelelo ezenzelwe umthengi, izicatshulwa ezithunyelwe ngeposi, iikopi zezazisi, kunye nefoto evela kwikhamera yewebhu.
Ukuqinisekisa unxibelelwano lwangaphandle, imisebenzi yonxibelelwano ngombane kwiifomathi ezininzi- iViber, iSMS, i-imeyile, iminxeba yelizwi, esetyenziselwa ukuxhasa ukuthumela kunye nokwazisa. Umthengi waziswa ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwimihla yokuvuthwa echazwe kwindawo yogcino lwamatyala. Kukho isikhumbuzi somhla kunye nenani lentlawulo, isaziso sesohlwayo. Ukuthunyelwa ngeposi kulungiselelwe iinjongo zentengiso ukukhuthaza iinkonzo kunye neefomathi ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwisizathu esikhethiweyo sokuxhasa ukunxibelelana - ngokukodwa, ngobuninzi, nakwiqela ekujoliswe kulo.
Amaxwebhu aveliswe ngokuzenzekelayo aquka naluphi na uhlobo lokunika ingxelo, kubandakanya ezemali, ezobalo, ezobalo kunye nezinyanzelekileyo, ikhontrakthi esemgangathweni kunye nee-invoice. Xa usenza isicelo sentengo yemboleko, le nkqubo ivelisa ngokuzenzekelayo isivumelwano semali-mboleko kwi-MS Word kunye neenkcukacha zabathengi ezifakiwe kuyo kunye neemeko zemboleko ezivunyiweyo. Xa ufaka isicelo sekhredithi, inkqubo ngokuzenzekelayo ibala intlawulo ithathela ingqalelo inqanaba lenzala, itshintshe inani layo xa inqanaba lotshintshiselwano luguquguquka, ukuba ngaba imali mboleko ikhutshiwe kuyo. Inkqubo ezenzekelayo igcina amanani kuzo zonke izikhombisi, kubandakanya nenani lezicelo ezivunyiweyo nezaliwe, ezivumela ukucwangciswa okusebenzayo. Ngokusekwe kubalo-manani, ingxelo yangaphakathi iyenziwa ngohlalutyo kunye novavanyo lwazo zonke iintlobo zomsebenzi, ezenza ukuba kuphuculwe umgangatho wazo kunye nokuqinisekisa ukukhula okunenzuzo.
Uhlalutyo lwezalathi langoku lusivumela ukuba sivavanye umsebenzi wabathengi ngexesha elithile, imfuno mboleko, ukusebenza kwabasebenzi, ukuphambuka kwishedyuli yokuhlawula, kunye netyala eliyintloko. Ukunika ingxelo ngohlalutyo kuboniswa ngendlela efanelekileyo nebonwayo-iitafile, iidayagramu, kunye neegrafu ezibonisa ukubaluleka kwesalathi ngasinye ekufumaneni inzuzo. Uhlalutyo lwezixhobo zemali likuvumela ukuba uvavanye umgangatho wepotifoliyo yekhredithi, umisele ukufaneleka kweendleko zomntu ngamnye, ukuchonga iindleko ezingezozivelisi zeenkqubo kunye nemali yamatyala.
Ukufakwa kwenkqubo kwenziwa ngabasebenzi beUSU Software. Ekuphela kwemfuneko yezixhobo zedijithali yinkqubo yokusebenza yeWindows. Emva kofakelo, kukho umboniso wezakhono zesicelo sokuphendula ngamatyala emboleko.